Kedụ ka m si eji MV-22 Osprey's Hoist / Sling?
Kedụ ka m si eji MV-22 Osprey's Hoist / Sling? 2 ọnwa 1 ụbọchị ago #1797
Ya mere enwere m mmasị iji MV-22 Osprey nke dị na saịtị a, mana enwere m nsogbu.
Osprey nwere ihe ndọkpụ / ịgba èbè, mana enweghị m ike ịrụ ya. Ihe m nwere ike ime bụ imeghe ọnụ ụzọ mmiri maka hoist / sling si VC ma ọ bụ ya. N'agbanyeghị mkpịsị ugodi m pịa ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'akụkụ ahịrị ndị ahụ, enweghị m ike ịgbanye sling / hoist ma mee ka ọ rụọ ọrụ.
Onwere onye nwere mmezi ya?
Oge ike page: 0.318 sekọnd